မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ရှေ့နေတစ်ဦး အကြံဉာဏ်ရှေ့နေပေးတဲ့မှန်နဲ့ပညာတတ်အဖြေအတွက်အချိန်အတိုတောင်းတဲ့ကာလ။ သို့ရရန်ခက်ခဲပြီးအခွအေနေလွယ်ကူ၊နှင့်ဥပဒေရေးရာအသိပညာအလုံအလောက်၊မအမြဲ။ ဤအမှု၌၊ရှေ့နေတစ်လမ်းထွက်။ အသိပညာ၏ကုဒ်များနှင့်ဥပဒေများကိုသင်ကြားပေးသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အခြေအဖြေရှာရန်၊သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံအမှုအရာနိုင်လွန်းရှုပ်ထွေး။ ရသည့်မေးခွန်းကိုအဖြေကိုမရရှိခဲ့၊နှင့်လိုအပ်သောဖြေရှင်းချက်မဖြစ်စေခြင်းငှါ။ ယခုဖြစ်နိုင်ဖို့မေးခွန်းတွေမေးမြန်းဖို့ရှေ့နေတစ်ဦးအွန်လိုင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အားသာချက်များ: အမြန်နှုန်းသတင်းအချက်အလက်; အရည်အချင်းကိုကျွမ်းကျင်သူအကြံဉာဏ်; အဘယ်သူမျှမပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်။ သင်ရှာလိုလျှင်ကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူပြန်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါငါတို့၏န်ထမ်းများအတွက်အကြံဉာဏ်။ အကြှနျုပျတို့သညျအစဉ်အမြဲအဆင်သင့်ကူညီဖို့အတွက်အခက်ခဲအခြေအနေ။
မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ရှေ့နေတစ်ဦး တခါတရံယောက်ျားနှင့်တွေ့ဆုံထိခိုက်မခံတဲ့ကိစ္စကခက်ခဲကိုဖြေရှင်းဖို့အပေါ်မရှိဘဲ၊မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်အထူးကုအမည်အလွယ်တကူသဘောတူညီနှင့်အတူကိစ္စရပ်များကိုလိုအပ်ကြောင်းနက်ရှိုင်းသောတိကျသောအသိပညာ၊နေချိန်မှာမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်လိမ္မာသောပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ငွေကုန်ကြေးကျရှိနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏသာအထူးကုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ညာဘက်အစီအစဉ်များ၏အရေးယူအတွက်အချို့သောရိုးရှင်းတဲ့အခြေအနေ။ အဖြေမယ်ဆိုရင်လိုအပ်စ္ရိွ ပါကတတ်မြောက်ရေးဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ယခင်ကရရှိသော၊သံသယ. အကောင်းဆုံးအဖြေသည်အယူခံအကူအညီမှာအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်»ကော»။ အင်တာနက်အရင်းအမြစ်အတူတူယောတိုင်းပြည်အနှံ့ကနေ။ အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအနာ့့လူတိုင်းနိုင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ရှေ့နေတစ်ဦးအွန်လိုင်းနှင့်ရရန်ချက်ချင်းကျွမ်းကျင်သူအကူအညီအပေါ်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ။»ကော»ရန်အထောက်အကူဖြေရှင်းနည်းများကိုတွေ့ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များ၊နှစ်ဦးစလုံးဥပဒေရေးရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၊ဖျော်ဖြေ၏ဖျန်ဖြေသူအကြားအထူးကုနှင့်အအပ္သည္။ တရားဝင်အကူအဇိုင်းသာရရှိရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်နှင့်အခေါ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ။ အခွင့်အလမ်းမှအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအဖော်သည်ပညတ်တရား၏လယ်ပြင်၌အဘယ်သူမျှမလျော့နည်းအရေးနှင့်လက်တွေ့ကျအကျိုးကျေးဇူးများ။ အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်»ကော». ကြား၏အားသာချက်များကိုရှာများ၏ဝန်ဆောင်မှုတယ်»ကော၊»သင်မီးမောင်းထိုးအဓိက: ၁။အချိန်ချွေတာ။ နိုင်ရန်အတွက်မေးမြန်းဖို့ရှေ့နေမလိုအပ်ပါဘူး၊သွားကြဖို့ရုံးမှာအချို့သောအချိန်များတွင်။ ၂။အများ၏သတင်းအချက်အလက်။ ပညာရှင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ဥပဒေကြောင်းအရအလယ်မှာအပြင်အချိန်ပေးလိမ့်မည်ဖောက်သည်များနှင့်အတူတိကျမှန်ကန်အချက်အလက်။ ၃။အခွင့်တောင်းဖို့ရှေ့နေတစ်ဦးအခမဲ့အဘို့။ ၄။အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်။ အထူးကုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအနာ့့အပေါ်မူတည်ရလဒ်များကိုများ၏မိမိအလုပ်နှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု။ ၅။ရှာရှေ့နေများအားဖြင့်ဒေသ။ အဆင်ပြေဘို့အရှာဖွေနေတဲ့သူဖောက်သည်များအဘို့အ»သူတို့ရဲ့»ရှေ့နေ၊အဘယ်သူနောက်ပိုင်းတွင်ပူးပေါင်းဖို့မျှော်လင့်ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်။ အင်တာနက်အရင်းအမြစ်»ကော»ပေါင်းစပ်ကူညီရှာဖွေအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးကိုဒေသများရှိ၏။
မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ရှေ့နေတစ်ဦး လူတန်းစားဘဝအခြေအနွယ်နှင့်အတူများ၏အဖြေအချို့ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ရာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရှိပါတယ်၊အသက်တာ၌လူတိုင်း၏။ ဖို့အချိန်ရှာဘို့အထူးကုရှိပါတယ်၊နှင့်အဖြေကိုလိုအပ်ချက်များကိုရရှိရန်စ္ရိွ-ရ၏။ ခင်ဗျားတို့သိကြလား ဆယ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းပြဿနာလိုပဲရာတွင်၊ဒါပေမယ့်အခုတော့အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ၊နှင့်အဘယ်မှာအစဉ်အဆက်သင်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့၊အင်တာနက်ကိုအသုံးပြု၊မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ရှေ့နေတစ်ဦးအွန်လိုင်း။ အရည်အချင်းပြည့်ထောက်ပံ့ဖို့အဆင်သင့်ပေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအဝေးမှပင်မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်-ရုံ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်။ အကြံပေးချက်ကိုအွန်လိုင်း၊လုံးဝမညံ့ေနာက္ဆုံးအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးည့်အတွက်ဥပဒေရုံးသို့မဟုတ်ရုံး။ ဒါဟာအစအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ဒါပေမယ့်လည်းသက်သာပြီး၊အကြီးဆုံးကတော့၊လှုံ့ဆျော။ ဘယ်မှာသင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့ရှေ့နေတစ်ဦးအွန်လိုင်း. ဒီနေ့ဥပဒေရေးရာများမှာကျယ်ပြန့်လိုုေအင်တာနက်ကိုအတွက်။ ရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးသောဘလော့ဂ်များ၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုက်များနှင့်သောဆိုဒ်များပေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရရှိဒီလိုမျိုးအွန်လိုင်းအချက်အလက်။ သို့သော်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ဘာသယံဇာတအရင်းအမြစ်ကိုသုံးပါ၊သင့်အာရုံစိုက်ဖို့အများအပြားအရေးအခြေအနေ: အရင်းအမြစ်ရှိရမယ်အပြုသဘောဂုဏ်သတင်း; ဒါကိုလိုအပ်ခံရဖို့သက်ဆိုင်ရာ(ဥပဒေ)နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းနိုင်အာမခံ၏အရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှုပေး; ရှေ့နေများသည်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ရမည်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်အတူသင့်လျော်သောမှတ်တမ်းအထောက်အထားများမိမိတို့၏အရည်အချင်း(မာ၊လက်မှတ်များ၊လက်မှတ်များ၊လက်မှတ်များ); အရင်းအမြစ်ကိုပေးရမညျ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုနိဂုံးချုပ်အများပြည်သူစာချုပ်၏အများပြည်သူပူဇော်ကြောင်းတင်ဆက်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူမခံသောအကွပ်များ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအားဖြင့်ပါတီ; အရင်းအမြစ်ပါဝင်ရမည်အချက်အလက်အပေါ်ဦးတည်ချက်နှင့်အတွေ့အကြုံ၏ရှေ့နေတစ်ဦးသို့မဟုတ်ရှေ့နေ၊မိမိအလုပ်လုပ်ကိုင်အောင်မြင်မှုများ။